राज–इच्छा के हो ?
मुलुकका सडकभरि राजतन्त्रको पक्षमा भइरहेको नाराबाजीको परिणाम के हुने ? जिलला, नगर हुँदै गाउँ, वडासम्म आफूखुशी राजतन्त्र जिन्दावादको नारा लागिरहेको छ, यो जनमेहनतको फल के हुने ? यस्ता जनआक्रोशलाई राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याएर सिंहदरवारमा बसेका मठाधीश र पिठाधीशसँग वार्ताका माध्यमबाट पूर्वराजालाई पनि संविधानमा स्थान दिलाउन पहल गर्ने व्यक्तित्व को छ ? आन्दोलन अझ ठूलो हुनसक्छ, गोलवद्ध बनाउने कसले ? यो जनअपेक्षा यत्तिकै सेलाउने त होइन ? लोकनामको सरकार र राजनीतिक दलहरुले अति गरेकाले जनता सडकमा निस्किएका हुन् । कतैबाट जनआवाजको सुनवाई नहुने नै हो त ? यो स्थिति आउनु देशकै दुर्भाग्य हो । राज–इच्छा के हो ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्दैन ?
जनता जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा भएको गल्ती सच्याउन चाहन्छन् । जनता राजा राजा भनिरहेका छन् राजा मौन छन् किन ? जनता खुलस्त राजाको साथ खोजिरहेका छन् । कहाँ कहाँ कसलाई मिलाउने हो, त्यो राजाको काम हो । जनता राजा खोजिरहेका छन् । जनताको गुहार सबैले देखेका छन्, पूर्वराजाले पनि देखेकै छन् । सडकबाट गरेको जनगुहार नसुन्ने हो भने जनताको भार लाग्छ । जनताको समर्थन कता छ, अझै जान्ने इच्छा भए जिल्ला भ्रमण गर्दा हुन्छ । मठमन्दिर गएर पूजा गर्दा पनि हुन्छ । देशका चारै दिशाका जनतासँग भेटवार्ता पनि गर्न सकिन्छ । शािन्तपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि जनआन्दोलनभन्दा ठूलो आन्दोलन हुनसक्छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा, नेपालका बहुसंख्यक जनता राजावादी छन् । हिमाल, पहाड, तराईमा राजावादीहरुको लर्को नै छ । जनयुद्ध र जनआन्दालनताका अलमलिन पुगे, अव ती सबैको आँखा खुलिसकेको छ । अव पूर्वराजा देशका लागि, जनताका लागि जनतालाई आह्वान गरेर सडकमा आउनसक्नुपर्छ । जनताको अपेक्षामा मनोवल बढाउन र राजइच्छाको थाहा दिन अव जरुरी भयो ।
बुढापुराना त छँदैछन्, आज युवाहरु पनि बढ्दो अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट आक्रोसित छन् । तिनीहरुलाई देशको जिम्मेवारी सुम्पने गरेर लोकतान्त्रिक राजतन्त्रका लागि अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ । निश्चित छ, निरंकूशहरु यो भाँडतन्त्र कायम राख्न चाहन्छन्, युवा अगाडि आउने हो भने यस्ता अराजकहरु पाखा लाग्नेछन् । आज सबैतिर भताभुङ्ग अवस्था छ । जनता एक छन्, जो पार्टीका कार्यकर्ता बनेका छन्, ती पनि युवासँगै आउनेछन् । यसपछि हरेक तह र तप्का मर्यादित हुनेछ, समानता र स्वच्छता कायम हुनेछ । व्यभिचारको अन्त हुनेछ । हिजो राजा सामन्त हुन् भनेर भड्काए । आफै महासामन्त बने । राजा फालेर बादशाही सुरु भयो । एउटा राजा थिए, हजारौं राजाहरु जन्मिए । अव जनता एकजुट भएर हिम्मतका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । ०७४ सालको भाइटीकाका दिन शोभा निवास कमलादीमा पत्रकारहरुलाई भनेको कुरा फेरि एकपटक सार्वजनिक भए राजतन्त्तवादीहरुमा उत्साह बढ्ने थियो । पूर्वराजाले दिनुभएका हरेक सन्दशहरुमा देशको, जनताको चिन्ता देखिन्छ । त्यो चिन्ता हरणका लागि व्यवहार देखाउने बेला आयो । भाँडिएको बिगारिएको मुलुक सम्हाल्न आउने हो कि होइन ? नागरिकमात्र हुने हो भने पनि नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ । कर्तव्य निर्वाह गर्न पनि अव पूर्वराजा जनतावीच ओर्लनुपर्छ ।